Etu esi egbochi Documents na Desktop si mekọrịta na iCloud | Esi m mac
Site n'ụdị El Capitan anyị nwere ohere ịmekọrịta faịlụ niile anyị nwere na Documents na Desktops folda na iCloud. Ọ bụ ngwa ọrụ bara uru ma bara uru maka ndị niile na-arụ ọrụ na ọtụtụ kọmpụta n'otu oge, n'otu ụzọ ahụ ọ gụnyere ịme ndabere akpaka nke ozi niile dị na folda abụọ a. Agbanyeghị, ihe niile nwere ọghọm ya. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eji nnukwu faịlụ, dị ka vidiyo, ọrụ a nwere ike ịbụ impractical, na-ewere a nnukwu akụkụ nke gị iCloud ebe nchekwa ikike. Ya mere, ugbu a anyị na-egosi gị otu esi gbanyụọ nhọrọ mmekọrịta ka ị nwee ike ịhapụ ya na mmasị gị.
Tupu ịmalite, Anyị na-akwado ka ị chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere nkwado ndabere akwụkwọ nke akwụkwọ ndị ahụ na folda ndị a. O nwere ike ịbụ na ihichapụla ha site na nkwado oge Time Machine gị ma ọ bụ mmemme mmemme gị, ebe ọ bụ na a na-edegharị ha na iCloud, ị nweghịkwa nkwado nke ha.
Nhọrọ ọzọ ndị ọrụ tụlere chọrọ ị dKwado syncing faịlụ, ma debe faịlụ na mpaghara na Mac,, dịka anyị mere tupu anyị enwee mmekọrịta mmekọrịta na igwe ojii. Iji mee nke a, tupu ịmalite, detuo faịlụ niile na folda ọzọ, ma ọ bụ mepụta otu maka nzube a na ụzọ ndị a: Macintosh - Ndị ọrụ - (onye ọrụ na-arụ ọrụ).
Ozugbo ekwenyechara, ka anyị bido:
Gaa na Mmasị sistemụ. Nwere ike ịnweta ya site na apụl Apple, site na Dashboard ma ọ bụ site na Chakwasa ihie.
Chọọ akara ngosi iCloud. Pịa na ya.
Chọọ maka nhọrọ ahụ iCloud mbanye wee pịa bọtịnụ nhọrọ, nke dị n'aka nri nke iCloud Drive.
Nhọrọ mbụ bụ Desktọpụ na akwụkwọ nchekwa. Wepu akara na ị nọ n'aka ekpe.
Ozi nkwenye ga-apụta. Kwenye ihe a.
N'oge a, faịlụ gị agakwaghị emekọrịta, mana ha ka nọ na iCloud, echere m ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ohere na ọrụ igwe ojii gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi egbochi Documents na Desktop si syncing na iCloud
Ndị ọrụ nchekwa kwenyere na Apple kwesịrị ịkwụ ụgwọ ọzọ iji chọta chinchi